>မြေပြန့်ရောက် တောင်ပေါ်သား စိုင်းခမ်းလိတ် မြန်မာစစ်အုပ်စု၏ သံရုံးနှင့် အစိုးရရုံးများကို ဖက်စ်ထိုးပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆိုမည် မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂ ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၀၉ ပြည်တွင်းတွင် အစွမ်းကုန်ဖိနှိပ်ထားသဖြင့် မြန်မာပြည်သူတို့၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအပေါ် သဘောထားကို ထုတ်ဖော်ခွင့်မရသည့် အချိန်၊ လူထုခေါင်းဆောင် ၆၄ နှစ်ပြည့်မည့် ယခုလ ၁၉ ရက်မတိုင်မီ၊ ယမန်နေ့ ၁၁ ရက်က စပြီး စစ်အုပ်စု၏ ပြည်ပက သံရုံးများ၊ ပြည်တွင်းက အစိုးရရုံးအသီးသီးသို့ ဒေါ်စုလွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆိုသည့် စာတမ်းပါ ဖက်စ်များ အဆက်မပြတ် ပေးပို့ ပြီး ဆန္ဒပြကြရန် နယူးယောက်မြို့က ဘားမားပွိုင့်အဖွဲ့က မေတ္တာရပ်ခံထားသည်။ ဘားမားပွိုင့်အဖွဲ့၏ ၀က်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားရာ လှုပ်ရှားမှုတခုမှာ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များဖြင့်...
> Photo Jittoo (Monywa) – 64 for Suu, Special Card June 12, 2009 No tags for this post. Related posts No related posts.
>Maung Yit – Remembering Maung Thaw Ka
> မောင်သော်က (၁၉၂၈ – ၁၉၉၁) သို့ ပို့သခဲ့သော မေတ္တာများ ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၈ နှစ် မောင်ရစ် ဇွန် ၁၁၊ ၂၀၀၉ ကိုမောင်တူးက သူ့ဂျီမေးက ချက်ပေါ်မှာ ရေးထားတယ်။ မောင်သော်က ကွယ်လွန်တာ ၁၈ နှစ် ရှိပြီ တဲ့။ ပြီးတော့ သူက အဲဒီအစီအစဉ်လည်း လုပ်ချင်သေးသတဲ့။ မြန်မာအိုင်အက်စ်ပီက စင်္ကာပူနဲ့ ပြည်တွင်းကဘလောက်တခုက ဆရာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာတွေကို စုစည်းပြီး ဖော်ပြထားတယ်။ ဆရာဒေါက်တာလွဏ်းဆွေက အဲဒါတွေကို စုထားတဲ့အပြင် ဒေါ်စုရဲ့ မြန်မာပြည်ကလာတဲ့စာထဲက ဆရာမောင်သော်ကအကြောင်း ဆောင်းပါးကိုပါ တွဲထားလိုက်သေး။ အဲဒီ စကရစ်ဘ် အီးစာအုပ်ကို စီစဉ်သူကတော့ ကိုလတ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။ သာဓုပါခင်ဗျား။ ဆရာက သူ့သရော်စာတွေကို...
>Cartoon Maung Yit – Need Need to Register Guest at Naypyidaw
> ကာတွန်းမောင်ရစ် – နေပြည်တော်မှာ ဧည့်စာရင်းတိုင်စရာ မလိုပါ ဇွန် ၁၁၊ ၂၀၀၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
>E Book – Poems of Conscious Vol 1 Out
>မြေပြန့်ရောက် တောင်ပေါ်သား စိုင်းခမ်းလိတ် ယုံကြည်ချက်ကဗျာများ အပိုင်း၁ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ထွက်ရှိ စာအုပ်စင် သာဂိ ဇွန် ၁၁၊ ၂၀၀၉ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကဗျာတွေက အစချီပြီး မြန်မာကဗျာဆရာကြီးတွေနဲ့တကွ လူငယ်၊ လူရွယ်တွေရဲ့ ကဗျာတွေကို နေရာအနှံ့ကစုပြီး အီးစာအုပ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်ချက်ကဗျာများလို့ ဆိုတော့ ယုံကြည်ချက်အတွက် စွန့်လွှတ် စွန့်စားရသူတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကဗျာတွေလို့ ဆိုချင်ပုံပါပဲ။ မြန်မာကျူးပစ်ဖိုရမ်အဖွဲ့က စုစည်းထုတ်ဝေပါတယ်။ ပြည်တွင်းက စာဖတ်သူတွေအတွက် အီးမေးကတဆင့် ရကြရင် အဖိုးမဖြတ်နိုင်မယ့် စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ် ၂ စာအုပ် ထုတ်ဦးမတဲ့လို့လဲ ရေးထားပါတယ်။ ဒီနေရာကနေ ယူပြီး လက်ဆင့်ကမ်းကြပေတော့။ ဒေါ်စုအတွက် ၆၄ ပွဲလုပ်ကြမည့်သူတွေအတွက် စင်ပေါ်တက် ဖတ်ပြစရာ ဒေါ်စုကဗျာတွေလည်း ပါတယ်ဆိုတော့ အချိန်အခါ သင့်တော်လှပါကြောင်း...
>My MyitKyiNa – hyperthetis C & Myit Kyi Na
> အသည်းရောဂါ နဲ့ မြစ်ကြီးနား မိုင်မြစ်ကြီးနား (ဘလော့ဂ်) ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၀၉ အသည်းရောဂါထဲမှာ စီပိုးလို့ခေါ်တဲ့ Hepatitis C ဟာ တော်တော်ဆိုးဝါးတယ်။ ဒီရောဂါနဲ့ သေသွားသူတွေ မနည်းတော့ဘူး၊ ကျနော်တို့ မြစ်ကြီးနားမြို့ထဲမှာတင် တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ကြွေသွားခဲ့တဲ့ လူကြီးလူရွယ်တွေ မရေနိုင်တော့ဘူး။ ကျနော့် အမေလည်း ဒီရောဂါရှိနေတယ်၊ သူ့ရဲ့ အသိမိတ်ဆွေတွေထဲမှာလည်း စီပိုး ရှိသူတွေ အများကြီးပဲ။ ရွာထဲမှာ အသိထဲက သေသွားသူတွေရဲ့ သတင်းကြားရင် စီပိုး အသည်းရောဂါဟာ အဓိကတရားခံ ဖြစ်နေတာ သိရတယ်။ တနေ့ကလည်း သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ အကိုက စီပိုး ရှိနေတယ်ဆိုတာ ကြားရပြန်တယ်။ စီပိုးချည်းပဲ ကြားရလွန်းလို့ ကျနော်လည်း အလွန်အံ့သြမိ တွေးတောမိပါတယ်။ စီပိုးရောဂါက အဓိက သွေးကနေတဆင့်ကူးစက်တာလို့...
>Than Soe Hlaing – Nargis Diary 6
> သတင်းထောက်တဦး၏ နာဂစ်ဒိုင်ယာရီ – ၆ သန်းစိုးလှိုင် ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၀၉ ကမာကလွန်းရွာ မြင်ကွင်း မြန်မာ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ သံဃာများရဲ့ ဦးဆောင်မှု ကွမ်းခြံကုန်း မြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက်အသီးသီးမှ နေစရာ စားစရာ ဒုက္ခရောက်နေသူများကို နီးစပ်ရာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများက ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက် ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ပေါ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ပေါင်း ၆ ကျောင်းထက်မနည်းရှိပြီး ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများကိုယ်တိုင် ထိခိုက် ပျက်စီးမှုများ သော်လည်း မပျက်ပဲ ကျန်ခဲ့သည့် နေစရာ၊ ယိမ်းယိုင်သွားသော်လည်း အမိုးရှိနေသေးသည့် ဓမ္မာရုံ တို့လိုနေရာများမှာ ဒုက္ခသည်များက တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့နေထိုင်ကာ ဆရာတော် သံဃာတော်များ စီစဉ်ပေးသည့် စားစရာ များကိုစားသောက် နေထိုင်လျက်ရှိကြသည်။ မြန်မာ ကျေးလက်ဒေသတွင်...
>Maung Yit – Me and My Accomplices
> မောင်ရစ်နှင့် သူ၏ အသိများအကြောင်း မောင်ရစ် ဇွန် ၉၊ ၂၀၀၉ မိတ်ဆွေများ ယခုလို အရေးကြီးနေတဲ့ ကာလကြီးမှာ – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ မိန့်ခွန်းကောက်နုတ်ချက်တခုနဲ့ နိဒါန်းပျိုးလိုက်ချင်ပါတယ်။ “ကျမတို့ကို နေရာတိုင်းမှာ မေးကြတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် ပြည်သူတွေအတွက် ဘာတွေ လုပ်နေသလဲ။ အန်အယ်ဒီပါတီက ဘာတွေ လုပ်နေသလဲ။ စသည်ဖြင့် မေးမြန်းကြတယ်။ ကျမတို့ကလည်း အခုလိုမေးတဲ့သူတွေကို ပြန်ပြီး မေးခွန်းထုတ်လိုက်ချင်ပါတယ်။ ရှင်တို့တတွေကကော အခုချိန်မှာ တိုင်းပြည်အတွက် ပြည်သူတွေအတွက် ဘာတွေများ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးပြီလဲ ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …” တဲ့။ (အတိအကျ မဟုတ်၊ အနီးစပ်ဆုံး စာကိုးစကားကိုး) အမေရိကန်သမ္မတကြီး ကနေဒီကလည်း ပြောပါတယ်။ တိုင်းပြည်ဆီက သင် ဘာတွေ ရမလဲလို့...
>Cartoon Saw Ngo – Prepared for the Worst …
> ကာတွန်း စောငို – အဆိုးဆုံးကို ပြင်ထားကြ ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၀၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Karen Ethnics fleeing from Burmese junta’s attacks
> နအဖ နှင့် ဒီကေဘီအေ ထိုးစစ်ကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ထွက်ပြေးလာသော ကရင်ဒုက္ခသည် ရွာသူရွာသားများ စာရင်းထုတ်ပြန် ကိုးကား – နန်းဖော့ဂေး၊ ကေအိုင်စီသတင်း ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၀၉ ဇွန်လ ၂ ရက်မှ ၈ ရက်အထိ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဒုက္ခသည်များ၏ စာရင်းနှင့် လက်ရှိအခြေအနေကို အောက်ပါအတိုင်း ကောက်ယူရရှိထားသည်ဟု ဆိုသည်။ စဉ် နေ့စွဲ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု လူဦးရေ ရောက်ရှိသည့်နေရာ မှတ်ချက် ၁ ၃/၆/ဝ၉ ထီးကဟော၊ဝါ့မီကလား၊ ၇၈ ၄၀၉ တိုးထာ့ မဲတန် မြောက်ဖက် ၂ ၄/၆/၀၉ စေဖိုးခီး ၂၁ နိုဘိုးဘုန်းကြီးကျောင်း ကျောင်းသားများပါ ၃ ၄/၆/ဝ၉ မဲတရိ(လေးကလို့ယော် အလယ်တန်းကျောင်း...
>Due to poverty, Junta’s security sold news photos to outside media
> မလောက်ငှ၍ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများကိုယ်တိုင် သတင်းဓါတ်ပုံ ရောင်းစား မိုးမခ အထောက်တော်၊ ရန်ကုန် ဇွန်လ ၁၀ရက်၊ ၂၀၀၉ အစိုးရ ပေးထားသည့် လစာနှင့် မလောက်ငှသဖြင့် အင်းစိန်ထောင်ရှေ့တ၀ိုက် တာဝန်ကျသည့် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများကိုယ်တိုင် အဖြစ်အပျက် သတင်းဓါတ်ပုံ အချို့ကို ပြည်ပ အခြေစိုက် သတင်းမီဒီယာများသို့ လျှို့ဝှက်စွာ ရောင်းချမှုများ ရှိနေသည်ဟု လုံခြုံရေး ၀န်ထမ်းများနှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်သူ တဦးက ပြောဆိုသည်။ လူထုလေးစား ကြည်ညိုသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မတရားအမှုဆင် ပြီး ရုံးတင်သည့် ကိစ္စ စတင်ပေါ်ပေါက်ပြီးနောက် အင်းစိန်ထောင်ရှေ့ တ၀ိုက်တွင် အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီဝင်များ၊ အခြားစိတ်ဝင်စားသူများ နှင့် ရဲ၊ စရဖ ကြံ့ဖွံ့ နှင့် စွမ်းအားရှင် အစရှိသူတို့ ဖြင့်စည်ကားနေလေ့ရှိသည်။ ထိုသို့...
Page 812 of 901«1...810811812813814...901»
>Daw Kyi Oo passed away today
>Saw Ngo Thagyan Poem
>Cartoon Saw Ngo - Than Shwe Grants Himself Power to Access 'Special Funds'
>Water shortage in Pegu region, Burmese community volunteer helps played great role